Android Oreo beta hadda waxa lagu rakibi karaa Huawei P10 iyo P10 Plus | Androidsis
Eder Ferreno | | Noticias, Noocyada Android
La Imaatinka Android Oreo ee suuqa ayaa keenay war aad u fara badan. Nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Google wuxuu ballanqaadayaa wax badan. Marka la soo bandhigo, su'aasha ugu muhiimsan waxay ahayd goorta ay gaari doonto aaladaha calaamadaha. Wax si tartiib tartiib ah u socda, laakiin Noocyada waaweyn ayaa bilaabay inay u cusbooneysiiyaan qalabkooda Android Oreo.
Hadda Markeeda Huawei ayaa imanaya. Summada Shiinaha ayaa ku dhawaaqday furitaanka xilliga diiwaangelinta ee Android Oreo beta ee laba ka mid ah taleefannadeeda ugu sarreeya. Waxay ku saabsan tahay Huawei P10 iyo P10 Plus. Inkasta oo aanay ahayn laba ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee suuqa ka soo muuqday, haddana waa laba nooc oo sifooyin adag leh.
Isticmaalayaasha leh mid ka mid ah labadan nooc ee horeba iska diiwaan gelin kartaa barnaamijka beta ee Android Oreo. Waa a xiran beta, sidaas darteed waa ay heli karaan dhammaan isticmaalayaasha doonaya inay is-diiwaangeliyaan. Waxaanu wax badan kaaga sheegaynaa sida aad tan u samayn karto haddii midkiin uu danaynayo inuu sameeyo.
Dhowr warbaahin oo Shiinaha ah ayaa mas'uul ka ahaa muujinta in barnaamijka beta uu jiro. Saacado kadib, Huawei lafteeda ayaa xaqiijisay. Isticmaalayaasha xiisaynaya inay isdiiwaangeliyaan, waa horeba suurto gal iyada oo loo marayo website-ka ee shirkadda. Waxaad ku samayn kartaa tan isku xirka. In kastoo, ay sidoo kale lagama maarmaan tahay in la soo dejiyo APK, waxaad samayn karto Halkan.
Isticmaalayaasha raba Waxaad ku rakibi kartaa beta-kan Android Oreo Huawei P10 ama P10 Plus. In kasta oo warbaahinta kala duwan ay faallo ka bixisay in laga yaabo inaysan ahayn tan ugu talinta badan. Marka la eego Waxqabadka aaladda ayaa laga yaabaa inay saamayso gaar ahaan. Markaa waxa laga yaabaa inay yara degdegto in la rakibo beta-gan.
Ugu yaraan, waxaan arki karnaa in magacyadu ay bilaabayaan cusboonaysiinta Android Oreo kahor dhammaadka sanadka. Halka macaamiil badan ay aamminsan yihiin in xawaaraha cusboonaysiinta uu ka gaabinayo sidii caadiga ahayd. U badan tahay bilawgii sanadka laxanka ayaa sii kordhay. Markaa waxaan arki doonaa sida magacyo badan ay ugu cusboonaysiiyaan Android Oreo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Beta Android Oreo waxaa hadda lagu rakibi karaa Huawei P10 iyo P10 Plus